Hello Nepal News » ला लिगाको उपाधि ताकिरहेका एथ्लेटिको र बार्सिलोनालाई जिदानको ‘रातो बत्ती’ !
ला लिगाको उपाधि ताकिरहेका एथ्लेटिको र बार्सिलोनालाई जिदानको ‘रातो बत्ती’ !
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रमुख प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले आफूहरू ला लिगाको उपाधि होडबाट टाढा नरहेको बताएका छन् । आज लिगमा अवे मैदानमा सेल्टा भिगोसँग खेल्नुअघि मिडियासँग कुरा गर्दै प्रेन्च कोचले ला लिगाको उपाधि ताकिरहेका लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिड दोस्रो स्थानको बार्सिलोनालाई अर्थपूर्ण र चेतावनीपूर्ण सन्देश दिएका छन् । जिदानले लिगमा अझै १० भन्दा बढी खेल रहेको बताउँदै यो धेरै समय रहेको बताएका छन् । जिदानका अनुसार रियलले ३८औं खेलसम्म उपाधि च्याम्पियन बन्नका लागि संघर्ष गर्नेछ । र, रियल अहिले त्यसका लागि सही दिशामा छ ।
हाल लिगमा एथ्लेटिको ६३ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा रहँदा ५९ अंक भएको बार्सिलोना दोस्रो तथा ५७ अंक भएको रियल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । ताजा अवस्थामा रियल लिग लिडर एथ्लेटिको भन्दा ६ अंक र दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाभन्दा २ अंकले पछि छ । आज राति सेल्टालाई हराएर रियलले बार्सिलोनालाई २ अंकले पछि पार्नेछ भने एथ्लेटिकोसँगको दूरी ३ मा छोट्याउनेछ । च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेर उत्साहित बनेको रियल अब लिगका हरेक खेल जितेर उपाधि होडमा अघि बढ्न चाहन्छ । बार्सिलोना र एथ्लेटिको दुवै च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भइसकेकाले रियल यतिबेला निकै उत्साहित रहेको छ ।
रियललाई लिगको उपाधि होडमा फर्किन सजिलो छैन । उसले आफ्ना खेल जितेर मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि लिग लिडर एथ्लेटिकोले कम्तीमा दुई खेल हारिदिनुपर्छ । तब मात्रै रियललाई उपाधि होडमा उत्रिन मदत पुग्छ । हाल २ अंकले अघि रहेको बार्सिलोनालाई उछिन्नका लागि रियलले अरूको नतिजा पर्खिनु पर्दैन, आफ्नै नतिजाले पुग्छ । सिजनको दोस्रो इएल क्लासिकोमा बार्सिलोनालाई हराए उसले बार्सिलोनालाई पछि पारिहाल्छ । बार्सिलोनामाथिको जित रियलका लागि उपाधि होडमा अघि बढ्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसैगरी, अझै बार्सिलोना भर्सेस एथ्लेटिको मड्रिडको खेल बाँकी नै छ । सो खेलमा बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोलाई हरायो र अन्य कुनै एक खेलमा एथ्लेटिको पराजित भयो जिदानले आशा गरेजस्तै गरी रियल अघि बढ्न सक्छ । तर, एथ्लेटिकोले बाँकी ११ खेलमध्ये २ खेल नहार्दासम्म रियलको कुनै सिप चल्दैन, यदि क्लासिकोमा बार्सिलोनालाई हराए पनि ।
रियलका प्रशिक्षक जिदानले पनि घुमाउरो पारामा आफूहरूले क्लासिकोमा बार्सिलोनालाई हराउने र एथ्लेटिकोले २ खेल हार्न सक्ने हिसाब गरेको बुझ्न सकिन्छ । ‘प्रशिक्षकका रूपमा मैले भन्नुपर्दा रियल मड्रिड अझै ला लिगाको उपाधि जित्ने होडमा छ । किनभने, लिगमा अझै ११ खेल बाँकी छन् । र, यो धेरै समय हो । यी खेलमा जे पनि हुन सक्छ,’ जिदानले भनेका छन्, ‘यदि हामी एथ्लेटिकोमाथि दबाब बढाउन चाहन्छौं भने आफ्ना हरेक खेल जित्दै दोस्रो क्लासिको जित्नैपर्छ । त्यसपछि हामीले एथ्लेटिको मड्रिडका आगामी खेल र नतिजा पर्खिनुपर्छ । उनीहरूले कहीं न कहीं गल्ती गर्नेछन् ।’
जिदानले अहिले आफ्ना खेलाडी नयाँ गति र आत्मविश्वासका साथ खेलिरहेकाले ला लिगामा कमब्याक असम्भव नरहेको बताएका छन् । ‘यो साँचो हो, ला लिगा हाम्रो मात्रै हातमा छैन । एथ्लेटिकोले अंक नगुमाउँदासम्म हामीले आफ्ना खेल जितेर मात्र पुग्दैन । तर, अहिले म र मेरा खलाडी बाँकी ११ वटा खेल जसरी पनि जित्नेमा दृढ छौं । उपाधिको सम्भावनालाई अन्तिम खेलसम्म जीवितै राख्न हामीले बाँकी हरेक खेल जित्नुपर्छ । र, एथ्लेटिकोको नतिजा पर्खिनुपर्छ,’ जिदानले भने, ‘मेरा लागि अझै पनि ला लिगा अंकगणितीय र व्यवहारिक दुवै हिसाबले खुला छ । टप–३ मा रहेका हामी सबै उपाधिमा खुला छौं ।’
प्रकाशित मिति ७ चैत्र २०७७, शनिबार ०४:५६